Izinto zangaphandle ezintle: into eziyiyo, iimpawu kunye nemizekelo | Uhlaziyo oluhlaziyiweyo
IsiJamani sasePortillo | 19/05/2022 12:00 | Yendalo
Las izinto zangaphandle ezilungileyo babhekisa kwiziphumo ezahlukeneyo eziluncedo ezinganxulumananga neendleko zemveliso okanye imisebenzi yokusetyenziswa kuluntu. Inyaniso kukuba zonke izenzo zethu kuluntu esiphila kulo, kungakhathaliseki ukuba zincinci okanye zilula kangakanani kwimbono yethu, zineempembelelo kwabanye abazenzayo. Ngamanye amazwi, olu hlobo lwangaphandle lwenzeka xa izenzo esizenzayo njengenkampani, njengomntu oyedwa, okanye njengosapho zinefuthe elimnandi neliluncedo kuyo yonke enye into.
Kweli nqaku siza kugxila ekuchazeni ukuba zeziphi izinto zangaphandle ezilungileyo, iimpawu zabo kunye luncedo.
1.1 izinto zangaphandle ezilungileyo
3 Ukusetyenziswa kwangaphandle
izinto zangaphandle ezilungileyo zonke ziyimiphumo emihle yemisebenzi yamalungu oluntu, engabandakanywanga kwiindleko okanye kwiinzuzo zaloo misebenzi. Inkcazo yobume bangaphandle obuhle ayiphelelanga kuyo nayiphi na intsimi okanye isayensi, ibandakanya zonke ezo ziphumo ezilungileyo, ezinkulu nezincinci, ukuba izenzo zakhe nawuphi na umntu okanye inkampani zinokuba nazo kuluntu lwethu.
Sithetha ngezinto ezintle zangaphandle ezingabandakanywa kwiindleko zemveliso okanye amaxabiso okuthenga, kodwa oko inokuba nemiphumo eyingenelo kakhulu kuluntu luphela. Utyalo-mali lwezibhedlele neelebhu zokufumana unyango lwezifo ezithile ngumzekelo woku. Ekuqaleni, usenokucinga ukuba oku kuzibophelela kwi-R&D kunokubiza kakhulu ukuba abaphandi abafumani nyango ngokukhawuleza.
Inyani isixelela okwahlukileyo koko, ukuba olu hlobo lomsebenzi luyimfuneko kakhulu kwintlalontle kunye nempilo yabantu, kuba kungekudala okanye kamva iyeza liza kufunyanwa elinciphisa iziphumo zesifo esihambelanayo. Eli yeza, elithatha ixesha ukulifumana, lidityaniswe notyalo-mali olubalulekileyo, iya kuba nembonakalo entle kakhulu kuluntu ngokusindisa amawaka obomi, kodwa oku akubonakali kwiindleko zokuqhuba olo phando lude noluphakamileyo.
Ngokungafaniyo nembonakalo entle yangaphandle, ingaphandle engalunganga sisiphumo sokwenza nawuphi na umsebenzi obangela umonakalo kuluntu, ayichazwanga ngexabiso layo. Nangona sijongana neengqikelelo ezivela kwicandelo lezoqoqosho, ezi ngqikelelo zinokugqithiselwa kuyo nayiphi na inkalo yobomi bemihla ngemihla.
Umzekelo omhle wezinto zangaphandle ezingalunganga kukungcoliseka kwendalo, ngakumbi ishishini, ngamaqumrhu amakhulu. Yiba nomfanekiso-ngqondweni wenkampani enkulu yemigodi esebenza ngokugrumba nokusetyenzwa kwamalahle. Xa belinganisa iindleko zokwenza umsebenzi, abawuthatheli ngqalelo izinga eliphezulu longcoliseko oluya kubangela ukusingqongileyo. Oku kuyaqwalaselwa ingaphandle engalunganga kwaye sisiphumo senkqubo yemveliso yenkampani kwaye ayibonakali kwixabiso lentengiso okanye kwindleko yokuvelisa amalahle.
Ukuba siyeka kwaye sicinge, phantse zonke izenzo zinezinto zangaphandle ezimbi kuluntu. Umzekelo, ukusetyenziswa kwecuba kuneziphumo ebezingalindelekanga eziyingozi kwimpilo yomsebenzisi, kodwa kudala izinto zangaphandle ezingalunganga ezinjengokwehla kwexabiso leziseko zophuhliso (ukuba umntu uyatshaya egumbini, iindonga zinokutshintsha umbala kwaye zonakaliswe ngumsi), kwaye zinokuba nefuthe elibi. kwimpilo yomntu (izigulane eziphefumla umsi wecuba).
Iirhafu kwiinkampani ezingcolisa kakhulu ukuya ukukhuthaza ukusetyenziswa kwamandla ahlaziyekayo kunye neenkqubo zemveliso ezizinzileyo.
Ukubonelela ngenkxaso-mali yophando nophuhliso, ngakumbi kwiinkalo zenzululwazi nezonyango.
Izinto zangaphandle, nokuba zilungile okanye zingalunganga, azikho kuphela kwinqanaba lezoqoqosho loluntu. Naluphi na uhlobo lokuziphatha, njengokutshaya okanye ukuphosa iplastiki ecaleni kwendlela, ingaba nefuthe elifutshane / elide kuluntu, olunokuthi lube lubi okanye lube luhle, kuxhomekeke kwindlela yokuziphatha.
Ukuziphatha okuthile kwabathengi kunokuba neempembelelo zangaphandle okanye iziphumo zesibini ezingaqwalaselwanga kwixabiso lentengiselwano. Ukusetyenziswa kwangaphandle kunokuba kuhle okanye kubi. Iindleko okanye inzuzo yemveliso, ukusetyenziswa okanye ukurisayikilishwa kwakhona kufuneka kuthathelwe ingqalelo xa kusenziwa imigaqo-nkqubo yoqoqosho lokusingqongileyo.
Izinto zangaphandle zivela xa amalungelo epropathi kunye nokusetyenziswa kobutyebi bendalo kubonelela ngeenzuzo zabucala kuphela ngaphandle kokuthathela ingqalelo iimpembelelo ezimbi okanye ezilungileyo.
Ngamafutshane, wena ngokwakho unokuphenjelelwa ngcono okanye okubi ngaphandle kokubandakanyeka ekuthengeni okanye ekuthengiseni imveliso. Kwimeko nayiphi na into, ukungenelela kulo msebenzi wezoqoqosho kuyimfuneko ukuze kuphuculwe impilo-ntle yabo bachaphazelekayo.
Ukuze asebenze kakuhle, amaxabiso emarike kufuneka ahambelane neendleko zabo okanye izibonelelo. Xa imveliso entsha inezinto zangaphandle ezimbalwa ezingalunganga kunye/okanye izinto zangaphandle ezintle kuneemveliso zemveli, kodwa zibiza kakhulu ukuvelisa, kufuneka kurhafiswe ngokomlinganiselo. Iindleko zezemali zoluntu ziya kuhlawulwa ngokunciphisa iindleko zoluntu lungisa izinto zangaphandle ezingekenzeki. Iimveliso ziya kuthi emva koko zibe nexabiso elikhuphisanayo ngaphandle kokuphulukana nengeniso kwaye abathengi baya kukhuthazwa ukuba bathenge. Abavelisi bayaphumelela, abathengi bayaphumelela, kwaye okusingqongileyo kuyaphumelela.
Ngesi sizathu, kufuneka siqwalasele izinto zangaphandle zokusingqongileyo kwaye sivavanye iimpembelelo ezithe ngqo nezingathanga ngqo zemveliso kokusingqongileyo. Eli xabiso kufuneka lithathelwe ingqalelo xa uthelekisa iimveliso, ngakumbi ukuba ukuthengwa kukwicandelo likarhulumente. Eyona mveliso inexabiso eliphantsi ayisoloko inexabiso eliphantsi.
Ngokomzekelo, amazwe akhupha icarbon dioxide eninzi kufuneka ahlawule irhafu eninzi. Yiyo loo nto urhulumente kufuneka ohlwaye iinkampani ezingcolisa. Kwakhona, ezi nkampani ziya kudlulisela ezi ndleko kwixabiso lokuthengisa. Ndiyabulela kule nto, iinkampani eziluhlaza zifumana ukukhuphisana. Le migaqo-nkqubo yenkuthazo yenzelwe ukunciphisa izinto zangaphandle ezimbi.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga nezinto zangaphandle ezintle kunye neempawu zabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » izinto zangaphandle ezilungileyo
Iindidi zepayina eSpain